Emva kweholide, sibuyele esiqhelweni malunga nomsebenzi. Wamkelekile kwiodolo, siya kuzilungiselela ngexesha. Ngendlela, iimveliso zethu eziphambili zii-coil ze-galvanized, iishiti ezenziwe kwangaphambili, iipayipi zensimbi kunye neeplate ezibandayo.
Umbhiyozo oMnandi weNtwasahlobo kubo bonke abahlobo!
Ndinqwenela wonke umntu ofunda eli nqaku uNyaka oMtsha waseTshayina owonwabileyo kwaye konke okona kulungileyo kulo nyaka uzayo. Ndingathanda ukuseka ubudlelwane bokusebenzisana naye nabani na ofuna iikhoyili zentsimbi, iikhoyili ezenziwe kwangaphambili kunye nemibhobho yentsimbi. Ngethamsanqa kunyaka omtsha!
Ngenxa yeempembelelo zesibetho se-cowid-19, ukuhanjiswa akufike ngexesha
Ngenxa yefuthe lobhubhane we-cowid-19, ezinye zezinto zethu eziluhlaza ziyanqongophala. Ngenxa yobhubhane e-Xingtai, kwiPhondo lase-Hebei, ezinye zezinto zethu ezingavunyelwanga ukuba zingahanjiswa, ngoko ke ukuthunyelwa akukho ngexesha, nceda uqonde. Ndiyakholelwa ukuba ngemizamo yenu nonke, thina ...
Ngeveki: Uluhlu lweentsimbi zemitshini yentsimbi yaseTshayina inyuka nge-6.3%
Ukusukela nge-13 kaJanuwari, isitokhwe ezintlanu zerabha, intambo yocingo, i-coil eshushu-eshushu, i-coil eqengqelekileyo ebandayo kunye neplate kwizingqusho zentsimbi ezivavanyiweyo zafikelela kwi-5.8 yezigidi zeetoni, ukonyuka kwe-6.3% xa kuthelekiswa neveki ephelileyo. Ingxelo yeveki ephelileyo ibiyi-3.2%. Kuchatshazelwe ukwanda kwamatyala e-COVID-19 kumaHeb ...
Imibuliso yamaxesha onyaka evela kwimpahla yeLiaocheng Derunying kunye neMathiriyeli Co.ltd
Ngo-2021 kanye kwikona yeqela lethu singathanda ukukubulela ngenkxaso yakho eqhubekayo ngo-2020. Sikunqwenelela, usapho kunye nabahlobo bakho iKrismesi entle kunye noNyaka oMtsha owonwabileyo. Jonga phambili ukunxibelelana nawe kuNyaka oMtsha, Iminqweno emihle！
Umzobo wentsimbi obandayo ogqityiweyo, osetyenziselwa iimveliso ze-Enamel-Ibhongo lethu
Umzobo wetsimbi ebandayo eqengqelekileyo, liqhayiya lethu, linokusetyenziselwa ukwenza i-enamel prducts, enje ngokulandela; Aslo, nceda ufumane imigaqo yokulandela (ngokweemfuno zabathengi):
Ukonakala kwemibhobho e-welding-ukuya eManila-Wamkele abanye abathengi banxibelelane nathi！
Sisandula ukutyikitya ikhontrakthi nabathengi baseManila. Samkela abathengi bamanye amazwe ukuba banxibelelane nathi.
Amashiti aqeshwe ngesinyithi avela eLiaocheng Derunying kumazwe angaphandle ukuya eVietnam
Ukuze sifezekise iimfuno zabathengi, yonke imisebenzi yethu yenziwe ngokungqinelana nesiqubulo sethu esithi: "Umgangatho ophezulu, ixabiso lokuThengisa ngokuKhawulezayo, iNkonzo ekhawulezayo" ngexabiso eliphantsi iTshayina iZinc Coating 40-180g / Iphepha leSinyithi eliQinisekisiweyo. ukubonelela ...
IBhodi yeCalcium yeSilicate-UKUTHUMELA KWELINYE I-CAT LAI, HCM, VIETNAM
Umnyhadala wolonwabo lwaphakathi ekwindla
I-LIAOCHENG IINKCUKACHA EZIQHELEKILEYO NEENKCUKACHA CO., LTD inisikelele nonke: Yonwabile uMnyhadala waphakathi ekwindla. Ungaqhagamshelana nathi ngeholide ukuba unomdla kwiimveliso zethu. Imeyile: xiejing_861208@126.com & dry@derunying.com WeChat: 18865285296
Iimveliso ezigqityiweyo njengoko bekucwangcisiwe
Umthengi owaziwayo owenziwe ngokuBumba uQinisekiso lwePlate njengesixhobo esenziwe ngokwenza iipleyiti zeceramic. Siwugqibile umsebenzi njengoko bekucwangcisiwe kwaye ngoku silinde ukuthunyelwa.
Izinto ezichaphazela ukudinwa kwamandla oMbane weZinto zeTyhubhu zentsimbi
Ukukhathala kwamandla e-tube yesinyithi engenamthungo evela kwi-Shandong Derunying inovakalelo olukhulu kwizinto ezahlukeneyo zangaphandle nezangaphakathi, apho izinto zangaphandle zibandakanya ukumila, ubungakanani, ukugudla komphezulu, kunye nemeko yenkonzo okanye izinto ezinje ngamalungu, kwaye izinto zangaphakathi zibandakanya ukwenziwa, .. .